श्वेताको टेक्नो लाइफस्टाइल (फोटो फिचर) - Living with ICT
Home / Featured / श्वेताको टेक्नो लाइफस्टाइल (फोटो फिचर)
श्वेताको टेक्नो लाइफस्टाइल (फोटो फिचर)
नेपालमा औलामै गन्न सक्ने उत्कृस्ट सेलिब्रेटीमा पर्दछिन नायिका श्वेता खड्का । उनलाइ नायिकाको मात्र परिचय दिनु अन्याय झै हुन्छ । उनि सफल महिला उद्यमी पनि हुन, जसले आधा दर्जन कम्पनी तथा सस्था सम्हालेर अघि बढिरहेकी छिन् । भनिरहनु पर्दैन्, केहि समयअघि कलाकार श्रीकृष्णको दुखद निधन पश्चात उनि छट्पटिन, तड्पिन र पिडामा दिनरात गुजारिन् ।
त्यो पिडा र दुखद घटनाको रिकभरी अवस्थामै छिन उनि अझै । तर हरेक दुख र सुखका साथमा सूचना प्रविधिलाइ साथीको रुपमा अंगालेर अघि बढेकी उनि एमआर कन्स्ट्रक्सन, होटल इन्ड्रेणी, सुनौलौ कोअपरेटिभ, बुद्ध लाइफ रियल स्टेट जस्ता संस्था तथा कम्पनीमा प्रमुख सञ्चालक र सस्थापकको रुपमा कार्यरत छिन् ।
केहि महिनाभित्रै उनकै लगानी र सञ्चालनमा फाइभस्टार स्टान्डर्डको स्विमिङ पुलसहितको हेल्थ क्लव खोल्दैछिन उनि । अरुको करकापमा फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी श्वेताले केहि उत्कृष्ट फिल्म खेलेकी छिन् । कोहिनुर पश्चात अरु फिल्म नआए पनि उनि करोडौ नेपालीको ढुकढुकीमा छिन् । उनै श्वेताको प्रविधि मोह र टेक्नो लाइफस्टाइलको बारेमा बुझौ न त !
नोकियाको २१०० मोडल
तपाइहरुमध्ये धेरैले नोकियाको यो फोन सम्झनुहुन्छ होला । श्वेताले पनि २०६२ सालमा प्लस टु अध्ययनको सिलसिलामा नै पहिलोपटक यो मोवाइल बोकेकि थिइन् । भर्खर भर्खर टेलिकमले लाइन लगाएर सिम बाढिरहेको देखेपछि उनले ममिलाइ कर गरेर रु ४२०० मा उक्त मोवाइल किनेकि थिइन । उनि सम्झिन्छिन ‘ कलेजमा अरु विद्यार्थी र शिक्षकले समेत मोवाइल बोकेका थिएनन् , त्यस बेला ब्लफकल र मिसकल पनि खुब गरिन्थ्यो ।’
आइफोन सेभेनको प्रतिक्षामा
अहिलेसम्म आधा दर्जन बढि मोवाइल सेट परिवर्तन गरिसकेकि श्वेताले पछिल्लो समय आइफोन ६ प्लस प्रयोग गरिरहेकी छिन् । नोकिया २१०० मोडलपछि सामसुङ कर्भि, आइफोन ४, आइफोन ५ र ५ प्लस पनि चलाएकि थिइन् । अब भने आइफोन ७ बजारमा आएपछि सोहि चलाउने उनि बताउछिन । ब्राण्डमा कन्सियस रहेकी उनलाइ पनि एप्पलले तानेको छ । ल्यापटपमा एप्पल म्याकबुक एयर र ५ वर्षदेखि आइप्याड चलाइरहेकि छिन उनले । ग्याजेट्स प्रति अपडेट र चासो राख्ने उनि समय, लाइफ स्टाइल र आवश्यक्ता अनुसार प्रविधिको गर्नुपर्ने सुझाउछिन् ।
मोवाइलमा मासिक १० हजारसम्म खर्च
मोवाइलमा उनको मनग्यै खर्च हुन्छ । व्यपार र अरु धेरै क्षेत्रमा संलग्न हुनुपरेको कारण पनि अलि ब्यस्त हुन्छिन उनि । पहिले मासिक १० हजारसम्म खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय श्रीकृष्णको निधन पश्चात रिकभरीमा भएकोले केहि कमि भएपनि हाल न्युनतम ५ हजार मोवाइलमा फोन र डेटाको लागि खर्च हुन्छ उनको ।
साइबर क्राइबाट पिडित
प्लस टु पढ्दै इन्टरनेट चलाउन थालेकी उनले फेसबुक, ट्विटर, भाइरबर, स्काइप लगायतका सोसियल साइट र एपहरु प्रयोग गर्छिन । फेसबुकमा धेरैले पेज बनाउने जथाभावी लेख्ने र सेयर गर्ने गरेकाले उनले साइबर क्राइम शाखा हनुमान ढोकामा गएर १८ बढि फेसबुक पेज र आइडी बन्द गराएकि थिइन । अफिसियल वाहेक अहिले अरु पनि पेजहरु रहेको उनि बताउछिन । इन्स्टाग्राम र ट्विटर समयको अभाव भएर पनि खासै चलाउदिनन् । फेसबुकमा दैनिक सयौ म्यासेज आउने र रिप्लाइ दिन र हेर्न नभ्याउने श्वेता सेलिब्रेटीलाइ फेसबुकमा प्रेमप्रस्ताव आउनु सामान्य मान्छिन ।
क्याण्डी क्रस र टेम्पल रनमा एडिक्ट
श्वेता मोवाइल तथा आइप्याडमा गेम खेल्न खुबै मन पराउथिन एक समय । पछिल्लो समय व्यस्त र अरु कुराले पनि गेमहरु मोवाइलबाट हटाएको बताउछिन । क्याण्डी क्रम त यति खेलिन्थ्यो कुरै नगर्नुस, धेरै पटक बाजी समेत जितेकी छु – उनि भन्छिन । टेम्पल रनमा एकपटक माजि राखेरै खेल्दा ६० हजार सेमत उनिले जितेकी थिइन् ।
वेबसाइट र एप बनाउने रहर
उनको फेसबुक पेज भएपनि पर्सनल वेबसाइट छैन, आफ्ना अफिस र कम्पनीका वेबसाइट भएपनि छुटट्ै पर्सनल वेबसाइट र एप बनाउने रहर छ उनको । धेरैले वेबसाइट बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ, अब चाहि समय मिलाएर बनाउछु उनि भन्छिन ।
अनलाइन समिङमा ब्याग र लुगा
अनलाइनबाट सामान खरिद गर्न रुचाउने श्वेताले पछिल्लो समय ब्याग अर्डर गरेकि थिइन् । रिकभरी र बिरामी समयमा उनले केहि लुगा र आवश्यक सामानहरु पनि अनलाइनबाट अर्डर गरेर प्रयोग गरेकि छिन ।
इन्टरनेट र ग्याजेट्स दुख सुखको साथी
श्वेताको लागि ग्याजेट्स र इन्टरनेट त लाइफस्टाइल नै भएको छ । यो बिनाको जिवन सायद सोच्न सकिन्न होला उनि भन्छिन । दुखमा परेको बेला इन्टरनेट र ग्याजेट्सले नै आफ्नो साथी भएको उनको अनुभव छ । प्रविधिले संसार एउटै परिवार जस्तो बनाएको र आफ्नो जिवनमा यसको महत्व ज्यादा रहेको उनि बताउछिन ।
फेरि फिल्म बनाउने, प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने
कोहिनुर पछि उनले फिल्म खेलिकी छैनन् तर उनलाइ यति धेरै र राम्रा अफरहरु आएका छन । अलिपछि राम्रो फिल्म खेल्ने वा आफै बनाउने उनको सोच छ । उनि विश्वास दिलाउदै भन्छिन, यतिका प्यारा फ्यानहरुको मायाले नै म यो अवस्थामा छु र बाचेर फर्केको छु, त्यसैले म उहाहरुबाट टाढा हुनै सक्दिन । प्रविधिको प्रयोग फिल्म क्षेत्रमा पनि भइरहेको र नेपालमा अझ धेरै गर्न बाकि रहेकोले अब आफुले बनाउने फिल्ममा आइटी र अरु प्रविधिमा जोड दिने सोच छ उनको ।
शब्द : राजन लम्साल
तस्विर : बिशाल राइ- www.bishalchautari.com
स्थान : मल्ल होटल, लैनचौर काठमाण्डौ
chatting with celebrity life style shweta khadka techno lifestyle 2016-08-06
Previous किन प्रयोग गर्ने एन्टिभाइरस ?
Next टेलिकमको रिचार्जको समस्या समाधान, सफ्टवेयरको कारण समस्या